डाक्टरलाई देखेपछि जनप्रतिनिधिले अनादर गरे, गाउँलेले लखेट्‍न खाेजे
त्यसबेला देशभर काेराेनाका ३० संक्रमित थिए । गण्डकीकाे बागलुङमा दुई जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यहीबीचमा पोखराबाट स्वास्थ्यकर्मीको टोली मुस्ताङ पुग्यो ।
जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलगायतलाई कोरोनाबारे जानकारी गराउन पाँच जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली मुस्ताङ पुगेको थियो । कोरोना संक्रमितको उपचारबारे तालिम दिन गएको टाेलीमा डा. बुद्धिसागर लामिछाने पनि थिए । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत फिजिसियन लामिछाने कोरोनाविरुद्ध सुरुदेखि नै खटिनेमध्येका हुन् ।
जुन उत्साह मुस्ताङ जाँदै गर्दा थियो, पुगेपछि त्यसमा ठेस लाग्यो । त्यहाँका सामाजिक अभियन्ता र नेताले किन आएका होलान्‌झैँ गरे । ‘त्यत्रो दुःख गरेर पुगियाे । उहाँहरूले बुझ्नुभएन, एकदम नमीठो लाग्याे’, डा लामिछानेले सुनाए ।
डर हुनु स्वाभाविक थियो । तर, जस्तो व्यवहार भए पनि डा. लामिछानेसहितको टोलीले दायित्व भुलेन । ६ वैशाखमा जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, पाँचवटै स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलगायतलाई तालिम दिए । डा. लामिछानेले कोरोनाको उपचार पद्धतिबारे जानकारी गराए ।
उनीसँगै गएकाहरूमध्ये कसैले स्याम्पल कलेक्सन गर्न, कसैले कोरोना नियन्त्रण गर्न आफैँले के गर्न सकिन्छ भनेर सिकाए । तालिमको दुई महिनापछि मुस्ताङी स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिलाई काम लाग्यो । ६ असारमा ८३ वर्षे वृद्धमा कोरोना पोजिटिभ देखियो ।
जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराएर उनी १६ असारमा घर फर्किए । ६ वैशाखको तालिम संक्रमित वृद्धको उपचारमा प्रयोग भयो । संक्रमित वृद्धले कोरोना जिते, मुस्ताङीले डाक्टरहरूको मन जित्न सकेनन् । डा. लामिछानेलाई जोमसोमको ठिहिरोले भन्दा स्थानीयको व्यवहारले मनमा हानेको रहेछ । ६ माघमा चौधरी फाउन्डेसनले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोरोनाकालको स्मरणीय घटना सुनाउँदा उनी वैशाखकाे पहिलो हप्तातिर फर्किए ।
महामारीमा कर्म नभुलेका डाक्टरलाई समाजले पनि खेदिरह्यो । छिमेकी टाढिन थाले, साथीभाइ उस्तै । आफ्ना भनेको घरका सदस्य मात्रै भए । आइसोलेसनको राउन्ड ड्युटीमा डा. लामिछानेको पनि पालो थियो ।
जेठमा हो, गतेचाहिँ याद छैन उनलाई । आइसोलेसन छिरे । बिरामी सिकिस्त देखिन्थे । सरासर गएर धड्कन नापे, फर्किए । पछि उनै बिरामीको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएछ । त्यसपछि डा. बुद्धिको फोन बज्न थाल्यो ।
‘यति धेरै फोन आयो..., अब कन्ट्याक ट्रेसिङमा परिस् भन्न थाले । त्यसपछि त कोही नजिक पर्नै खोजेनन्,’ डा. लामिछाने सुनाउँछन्, ‘समाजको त्यही व्यवहारले पछि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेँ । अहिले त्यो दिन सम्झँदा हाँसो लाग्छ ।’
त्यसपछि हल्ला चल्यो– डा. बुद्धिले त पन्जा नलगाई बिरामी छुन्छ, हेलचेक्र्याइँ गर्छ । ‘तर मैले बिरामीलाई छोएपछि हात धुन्थेँ । सुरक्षित भएरै काम गर्थें,’ उनले भने ।
कोरोनाको सुरुआती दिनमा अस्पताल आउजाउ गर्दा ट्राफिक प्रहरी ड्युटीमा सर्जिकल ग्लोब्स लगाएर बसेको देख्थेँ । त्यो फुकाल्न सुझाउँथे । अहिले पनि डा. लामिछानेसँग उपचार गर्न आउनेहरूले एउटा नियम पालना गर्नुपर्छ– सर्जिकल ग्लोब्स लगाउन पाइँदैन ।
कसैले ग्लोब्स लगाए उनी फुकालेर हात धुन लगाउँछन् । ‘कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने अझै हामी धेरैलाई थाहा छैन । त्यो अझै चिर्न बाँकी छ,’ डा. लामिछाने भन्छन्, ‘पन्जा लगाएर मोबाइल छोएपछि त्यहाँ भएको भाइरस सर्छ ।’ डा. बुद्धिले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएर ऊर्जाशील नाै महिना बिताइसके । उनले अझै हार मानेका छैनन् ।
कास्कीका पाँच पालिकामध्ये पोखरा महानगरबाहेक अरु पालिका कोरोना जोखिमको हिसाबले सुरक्षित नै थिए । कोरोनाले सहरभन्दा गाउँ बढी त्रसित थियो । मादी गाउँपालिकाले भदौबाट पढाइ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । घर गएका शिक्षकलाई गाउँपालिकाले केही दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर पीसीआर गर्ने तयारी गरेको थियो ।
बारा घर भएका शिक्षक परिवारसहित आए । लेखनाथतिरको विद्यालयमा पढाउने साली पनि सँगै आएकी थिइन् । सँगै क्वारेन्टाइनमा बसे । एक हप्तापछि जाँच्दा पोजिटिभ आयो । दोस्रो पटक पनि पोजिटिभ आएपछि गाउँले संक्रमितलाई गाउँ निकाला गर्न लागिपरे ।
‘एक पटक जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएर राख्यौँ । दोस्रोचोटि परीक्षण गर्दा पनि उहाँको पोजिटिभ आयो,’ गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक गोपालचन्द्र बराल त्यो घटना सम्झिन्छन्, ‘यसलाई लैजानुहुन्छ भने लगिहाल्नुस्, नभए ढुंगाले हानेर लखेट्छौँ भन्न थाल्नुभयो ।’
'मादी- ७, छाचोकको विद्यालयमा बसेका उनीहरूलाई गाउँलेले केही खानै दिन्नौँ भने । ३ घन्टामा व्यवस्थापन गर्नुस् भनेर अल्टिमेटम दिए । त्यसपछि स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीसँग समन्वय गरेर पोखराको आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्‍यौँ । तर, संक्रमितमाथि यसरी हिंसा भयो,’ स्वास्थ्य प्रमुख बरालले शिलापत्रलाई सुनाए ।
मादी- ७ का वडाध्यक्ष लालबहादुर गुरुङ पनि एक जनालाई लागेपछि सबैलाई लाग्छ भन्ने धारणा बोकेकाले त्यो घटना भएको बताउँछन् । ‘सुरुमा त एक जनालाई लागेपछि गाउँ नै सखाप हुन्छ भन्ने थियो । उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ भएपछि अस्पताल पठाउन भनेर आइसोलेसन खोज्यौँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘छ महिनाको बच्चा थियो । अस्पतालले आमा मात्रै भए राख्न सकिन्छ तर बच्चासँग हुँदैन भनेपछि निकै समस्या भयो ।’
ती शिक्षिकालाई बस्नै दिन्नौँ भनेपछि उनी एक्लैलाई पोखराको आइसोलेसनमा पठाइएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘आइसोलेसनमा एक हप्ता बसेपछि उहाँ आउनुभयो । बच्चालाई लिएर आफ्नै कोठामा जानुभयो,’ उनले भने, ‘हाम्रै गाउँपालिकाको भएको भए गाउँलेलाई सम्झाउन सकिन्थ्यो । बाहिरको भएर समस्या भयो नि ।’
गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य प्रमुख बरालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले संक्रमित नभएकाले ट्रेसिङमा कोही पर्नुभएको छैन । तर, कोही भेटिए पनि गाउँमै आइसोलेन बनाएका छौँ ।’
क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रका अनुसार पोखरामा दैनिक ७० देखि ८० पोका रगत माग हुन्छ । लकडाउनअघि दैनिकजसो रक्तदान कार्यक्रम हुन्थे । लकडाउनसँगै नियमित रक्तदान ठप्प भयो । त्यसपछि पोखरामा रगत अभाव हुन थाल्यो । रगत दान गर्न मान्छे डराउँथे ।
नियमित रगत दान गर्नेहरू महामारीमा पनि पछि हटेनन् । सुरुआती अवस्थामा कोरोना सर्ने डरले मान्छेमा डर देखिए पनि अहिले खासै समस्या नभएको केन्द्र प्रमुख अर्जुन ज्ञवालीले बताए । ‘लकडाउन भएपछि त मान्छे घरमै बसे । रगतको अभाव हुने भएपछि गाडी नै लिएर घुम्ती रक्तदानमा जान थाल्यौँ,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘अहिले माग र आपूर्ति बराबर छ । सेड्युल कार्यक्रम नभए फेरि समस्या भइहाल्छ ।’
कोरोना निको भएकाहरू पनि प्लाज्मा दान गर्न तम्तयार भए । प्लाज्माको माग कम भएकाले अहिले क्षेत्रीय रक्तसञ्चारमा ३० युनिट प्लाज्मा सञ्चित छ । ‘७० युनिट प्लाज्मा संकलन भएको थियो । ४० युनिट प्रयोग भइसक्यो,’ प्रमुख ज्ञवालीले भने ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १७, २०७७, ०६:१५:००